Wasaaraddii "awoodda lahayd" oo laga tagay - BBC News Somali
Wasaaraddii "awoodda lahayd" oo laga tagay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, Muusa Biixi ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada.
Waxay ka kooban yihiin 23 wasiir iyo sagaal wasiir ku xigeenno, wuxuuna meesha ka saaray wasiirro dowlayaasha.
Golahan wasiirada madaxweyne Muusa Biixi oo shalay xilka la wareegay uu magacaabay ayaa aad uga yar kuwii horey u soo maray Somaliland.
Sida uu sheegay weriyaha BBC-da ee Hargeysa, golaha wasiirrada ee xilka wareejin doono ee dowladdii Siilaanyo waxay gaarayaan illaa 70 xubnood.
Wasaaradaha laga tagay waxaa ka mid ah middii madaxtooyada. Madaxa hay'adda Ambaqaad ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigeedu aayahay Hargaysa Maxamed Sheekh Ibraahim Cadde, ayaa sheegay in wasaaraddaasi ay "dhaawac iyo dhib ku ahayd awood qeybsiga Somaliland".
"Waxaa si toos ah u caddaatay in madaxweynuhu xaqiijinay in awoodihii dastuuriga ee madaxweyne ku xigeenku soo noqdaan," ayuu hadalkiisa ku daray Maxamed Sheekh Ibaraahim.
Golahan wasiirada ee cusub ayaa u badan dad cusub, marka laga reebo afar wasiir oo kala ah wasiirka arrimaha dibadda, Dr Sacad Cali Shire, wasiirka waxbarashada oo ah Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon.
Sidoo kale wasiiraddii hore ee soo noqday waxaa ka mid ah wasiirka Diinta iyo Awqaafta Sheikh Khaliil Cabdillahi Axmed, iyo wasiirka wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil.
Korneyl Maxamed Kaahin Axmed - Wasiirka cusub ee wasaaradda Arimaha Gudaha
Ciise Axmed yuusuf - Wasiirka Gaashaandhigga
Axmed Muumin seed - Wasiirka Horumarinta Beeraha
Yusuf Maxamed Cabdi - Wasiirka Maaliyadda
Dr Xasan Ismaaciil yuusuf - Wasiirka Caafimaadka
Saleemaan yuusuf Koore - Wasiirka Horumarinta Biyaha
Hinda Jaamac Xirsi - Wasiirka shaqogelinta iyo arimaha bulshada
Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri-barwaaqo - Wasiirka Warfaafinta
Xasan Gaafaadhi - Wasiirka Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga
Cabdillahi abuukar - Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka
Tirada dumarka ee golahan wasiirada cusub ayaa aad u yar. Golaha oo gaaraya illaa 32 xubnood waxaa dumar ah laba wasiir iyo wasiir ku xigeen.
Maxamed Sheekh Ibraahim ayaa BBC Somali u sheegay: "Waa hungowga ugu wayn ee iiga muuqda xulashada madaxweyne Muusa Biixi".
Inkastoo golaha wasiirada uu soo dhisay Muuse Biixi maalintiisii ugu horeysay xafiiska, waxaa ay wajihi karaan khilaaf ku saleysan awood qeybsiga beelaha.
Balse golahan wasiirrada cusub waxaa horyaalla howlo badan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta iyo guud ahaan arrimaha gudaha.
Madaxa hay'adda Ambaqaad ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigeedu aayahay Hargaysa Maxamed Sheekh Ibraahim Cadde wuxuu qabaa in arrimaha horyaalla ay yihiin kuwii ay ololaha doorashada ay ku galeen.
"Waxaa looga fadhiyaa in ay wax ka qabtaan dhibaha nololeed ee mugga leh ee ka jira Somaliland oo ay ka mid tahay shaqa la'aanta, nabadgelyada, iyo dadka in loo jiheedo nolol iyo wax soo saar", ayuu yiri.
Somaliland oo canbaraysay Tacadiyada lagu hayo dadka Rohingya
Maqal Khaatumo iyo Somaliland oo wadahadlaya